Dagaalka Magaalada Marka oo waji kale yeeshay, Shabaab & Dowlada oo la kala Saftay Habar Gidir & Biimaal+Faafaahin… - Hablaha Media Network
Dagaalka Magaalada Marka oo waji kale yeeshay, Shabaab & Dowlada oo la kala Saftay Habar Gidir & Biimaal+Faafaahin…
HMN:- Magaalada Marka waxaa maanta ka soconaya Dagaal xoogan oo u dhaxeeya Beelaha Habar Gidir iyo Biimaal, waxaase soo baxaya warar cusub oo sheegaya in dagaalka uu yahay mid si weyn loo qorsheeyay.
Xog gaara oo ayaa sheegeyso in Ururka Al-shabaab iyagoo ku gabanaya Beesha Biimaal ay ku jiraan dagaalka, waxaana la sheegayaa in Beesha Biimaal ay dooneyso sidii ay isaga celin laheyd Habar Gidir isla markaana ay soo dhaweysaneyso cid kasta oo taageereysa.
Hub badan iyo ciidamo ayay dagaalyahanada Al-shabaab ku biiriyeen dagaalka waxayna la safan yihiin Biimaal, iyagoo la dagaalamaya ciidamada Beesha Habar Gidir.
halkaan hoos ka dhagayso codka
Sidoo kale xogaha la heleyo ayaa waxay sheegayaan in Habar Gidir aysan jirin ciidamo gaara oo dagaalka ugu jira balse ay yihiin ciidamadii dowlada ugu jiray oo qaarkood xitaa shalay laga daabulay magaalada Muqdisho.
Dadka goobjoogayaal ayaa inoo sheegaya in ciidamada labada dhinacba ay u badan yihiin kuwa xiran dharka lagu yaqaano ciidamada dowlada taasoo ah xeelad Al-shabaab ay kula dagaalamayaan ciidamada dowlada ee hab beeleedka ugu dagaalamaya Beesha Habar Gidir, waxana si aan arintaan loo fahmin dagaalyahanada Al-shabaab ay soo xirteen dharka ciidamada Militariga Soomaaliya.